Ururka al shabaab iyo dhalinyaro dagaalamay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ururka al shabaab iyo dhalinyaro dagaalamay
Qaar ka mid ah dhalinyaradaan oo la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa sheegay inaysan u dul qaadanayn in maalin kasta ay dadkooda dhibaato u gaystaan maleeshiyaadkaan Arxanka daran ee Al-Shabaab.
Sidoo kale masuuliyiin ka tirsan maamulka Gobalka Shabeellaha Dhexe oo la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa iyana sheegay inay ka war haayaan dhalinyaradaasi is abaabulay, haatana ay qorshaynayaan in ciidamo ka tirsan dowladda ay gaaraan degmadaasi Aadan Yabaal.
Ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa haatan sii xoojiyay howlgalada ka dhanka ah maleeshiyaadka Argagixisada Al-Shabaab, iyagoo khasaaro badan gaarsiiyay Argagixisada Al-Shabaab.
Xaalada Magaalada Baladweyne oo saakay degan
Golaha wasiirada hirshabeelle oo isku shaandheyn lagu sameyn doono